साथीहरुको नजरमा कस्तो छ किम जोङ उनको स्वभाव ? « News24 : Premium News Channel
साथीहरुको नजरमा कस्तो छ किम जोङ उनको स्वभाव ?
उनी उत्तर कोरियाको नेताको रूपमा विश्वभर चर्चित छन् । कुख्यात तानाशाह उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पश्चिमलाई बारम्बार आणविक धम्की दिन्छन् । तर सन् १९९० को दशकमा उनी अर्थात् ३४ वर्षीय कोरियाली नेता किम जोङ उन आफ्ना स्कुले साथीमाझ भने एउटा रमाइला पात्र थिए । जो बास्केटबल भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे ।
सन् १९९८ देखि २००० सम्म किम जोङ उन स्विट्जरल्यान्डको कोइनिजस्थित लाइबिफिल्ड स्टेनहोल्जी सरकारी विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । जुन वेला पिता तथा तत्कालीन नेता किम जोङ इलले उत्तर कोरियाली शासनको वागडोर सम्हालेका थिए । तर, विद्यालयमा उन भने पाक उनको नाममा परिचित थिए । स्विटजरल्यान्डस्थित कोरियाली दूतावासका कर्मचारीको सन्तानको रूपमा छद्म नाममा उनलाई विद्यालय भर्ना गरिएको थियो । सन् २०११ को एक रिपोर्टअनुसार उनी मिहिनेती र महत्वाकांक्षी थिए । उनको सोख फुटबल थियो, तर बास्केटबल राम्रो खेल्थे । विद्यालयका साथीहरूका अनुसार किम पुड्को र अलिक भद्दा शरीरको भए पनि बास्केटबल भने राम्रै खेल्थे । प्रविधिप्रति पनि उनको उत्तिकै सोख थियो । किम अमेरिकी बास्केटबल स्टार माइकल जोर्डनका फ्यान थिए ।
किम यसअघि पनि एउटा महँगो निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्थे । तर, शिक्षाका लागि हजारौँ डलर खर्च हुँदा पनि उनले सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरेका थिएनन् । किम स्विटजरल्यान्डको महँगो विद्यालय इन्टरनेसनल स्कुल अफ बर्नमा अध्ययन गर्थे । त्यहाँको वार्षिक फी १६ हजार युरो थियो । तर, फी अति महँगो भन्दै उनका बुवाले १५ वर्षे छोरालाई सो विद्यालयबाट निकालेर सन् १९९८ मा नजिकैको सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरे । कक्षामा किम जोङ उन पोर्चुगलका कूटनीतिज्ञका छोरा जोआओ मिसेलो सँगै बस्थे । छोटो समयमा नै उनीहरूबीच गहिरो मित्रता गाँसिएको थियो । हाल बर्नस्थित एउटा रेस्टुरेन्टमा सेफको रूपमा काम गर्ने मिसेलो भन्छन्, ‘हामी कक्षामा त्यस्तो लुसो विद्यार्थी थिएनौँ, न त असामान्य चलाख नै थियौँ । कक्षामा मध्यम तहका थियौँ ।’ तानाशाह किम कुनै वेलाको असल साथी भएको उनी बताउँछन् । मिसेलो भन्छन्, ‘हामी रमाइलो गथ्र्यौँ । ऊ असल व्यक्ति थियो । धेरै साथीहरूले उनलाई मन पराउँथे । तर आजभोलि खासै थाहा छैन ।’
मिसेलो थप्छन, ‘उनलाई बास्केटबल औधी मन पथ्र्यो । हामी सँगसँगे खेल्थ्यौँ ।’ एकपटक आफू उनलाई भेट गर्न इच्छुक भएको मिसेलो बताउँछन् । ‘विद्यालयकालको सम्झना छ भने मलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्छु,’ मिसेलो भन्छन् । एक दिन किमले मिसेलोलाई आफ्नो वास्तविक यथार्थ बताएका थिए ।
अर्को साथी बर्नकै मार्को इमहोफ पनि किम जोङ उनलाई रमाइलो व्यक्ति भन्छन् । ‘उनी रमाइला थिए । तर, आफू हार्न जान्दैनथे । उनका लागि जित सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्थ्यो,’ किमका अर्का सहपाठी भन्छन्, ‘उनमा ठट्यौली स्वभाव थियो । सबैसँग मिल्थे । उत्तर कोरियाका शत्रुराष्ट्रका अन्य साथीहरूसँग पनि उनी मिल्थे । ‘विद्यालयमा राजनीति प्रतिबन्ध थियो । हामी राजनीतिको सट्टा फुटबलबारे बहस गथ्र्यौँ,’ एम सोनट्याटले भने ।
किम जोङ उन किम जोङ इलका पाँच सन्तानमध्ये एक हुन् । उनका दाइ किम जोङ चुल र बहिनी किम यो जोङ सन् १९९० को दशकमा स्विटजरल्यान्डकै निजी विद्यालयमा पढ्थे । किमले गत वर्ष क्वालालम्पुरको विमानस्थलमा विष छर्केर मार्न लगाएका उनका सौतेलो दाजु किम जोङ नाम मस्को र जेनेभामा अध्ययन गर्थे ।
किम जोङ उनकी माइजू को योङ सुकले उनको विद्यालयकालमा स्विटजरल्यान्डमा अभिभावकको भूमिका खेलेकी थिइन् । सन् १९९८ मा उत्तर कोरियाली शासनविरुद्ध विद्रोह गरेरै को योङ सुकले अमेरिकामा एउटा डाइक्लिनिङ स्टोर सञ्चालन गरेकी छिन् । ‘हामी सामान्य घरमा बस्थ्यौँ र सामान्य परिवारको रूपमा रह्यौँ । म उनको आमाको भूमिकामा रहेँ,’ सन् २०१६ मा वासिंगटन पोस्टलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा योङ सुक भन्छिन् ।
‘म किमलाई उनका साथी घरमा ल्याउन उत्प्रेरणा दिने गर्थेँ । उनका साथीहरूलाई मैले स्न्याक्स बनाउँथेँ । उनीहरू केक खान्थे र लेगोस खेल्थे,’ सुक भन्छिन् । उनका अनुसार किम जोङ समस्याग्रस्त व्यक्ति थिएनन् । तर, उनी चाँडै रिसाउँथे र सानो कुरा पनि सहन सक्दैनथे । किम सामान्य कुरामा पनि आमासँग झगडा गर्थे र केही दिन खाना नै खाँदैनथे ।
स्विटजरल्यान्डमा पढ्दा किमको साथबाट शिक्षकले पोर्न म्यागेजिन फेला पारेका थिए । ली योङ गुकका अनुसार किम रिसाएपछि आँखा देख्दैनथे र विस्फोटक रूपमा प्रस्तुत हुन्थे । बिदाको समयमा किम माइजूसँगै इटालीमा स्काइङमा जान्थे, स्विटजरल्यान्डका साना पहाड चढ्थे र फ्रान्सका नदीनालको यात्रा गर्थे । सन् २००० मा किम उत्तर कोरिया फर्किएका थिए, तर उनले स्विट्जरल्यान्डका आफ्ना साथीहरूलाई पत्तो दिएका थिएनन् । उनका बाबु छोराको फी तिर्दा वाक्क भएका थिए । तर, किमको अमेरिकी संस्कृतिप्रतिको बढ्दो मोहका कारण पनि उनका बाबु झस्किएका थिए ।
किमका सहकर्मी मिसेलोका अनुसार उनीहरू हरेक दिन सँगै बस्थे । ‘उनी मलाई बारम्बार खान बोलाउँथे । किमले निजी सेफ राखेका थिए, जसले किमलाई मन लागेको खानेकुरा बनाउँथिन्,’ उनी भन्छन् । मिसेलोका अनुसार किम दूतवास भवनभित्र बस्दैनथे, बरु विद्यालयनजिकैको आवासीय क्षेत्रमा बस्थे । उनलाई टिभी, भिडियो रेकर्डलगायतका सुविधा दिन्थे । उनका आफ्नै निजी चालक र शिक्षक थिए । तर, विद्यालयजीवनमा उनी कहिल्यै मदिरा पिउँदैनथे । नयाँ पत्रिकाबाट